I-2x10 Podcast ye-Actualidad iPad: I-Apple Music iza kwi-Android nangaphezulu | IPhone iindaba
2 × 10 I-Podcast ye-Actualidad iPad: I-Apple Music iza kwi-Android nangaphezulu
Kule veki kwipodcast yethu sithetha ngayo I-Apple Music kunye nokufika kwayo kwiqonga lembangi yayo enkulu, uGoogle. I-Android sele inesicelo kuGoogle Play yeApple Music, kwaye iya kuhlala ilindelekile ukuba ukwamkelwa kwabasebenzisi be-Android kwinkonzo yomculo ka-Apple. Sikwathethile nangokuphehlelelwa kwe-Pro Pro kunye nokusilela kwimovie ye-Steve Jobs.
Mamela »2 × 10: I-Apple Music iza kwi-Android» kwiSpreaker.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » 2 × 10 I-Podcast ye-Actualidad iPad: I-Apple Music iza kwi-Android nangaphezulu
I-Swiftkey ihlaziywa nge-emojis entsha ye-iOS 9.1